> Resource > Video > MPEG Splitter: Sida loo Split MPEG / Mpg Yaryar Files
MPEG waa qaab caadiga ah oo khaas ah oo ay Guuritaanka Picture Khubarada Group. Marka file ah oo la magac kordhin .MPEG ama .MPG, sida caadiga ah aad qabto mid ka mid MPEG-1 ama MPEG-2 video, taas oo MPEG-1 waa u cajalladaha VCD iyo MPEG-2 waxaa loogu talagalay SVCD iyo DVD cajalladaha. Marka aad la kulanto dhibaatooyin hoos ku qoran, splitter MPEG ah aad markiiba ku caawin doona.
Ma u baahan tahay si ay u geliyaan MPEG video (tusaale ahaan in YouTube), laakiin waxa ay ku baaso xadka dhererka (ugu badnaan 15 daqiiqo) ah.
Video MPEG ayaa files aad u badan tahay. Waxaad u baahan tahay iyaga googooyaa cabbirka yar.
Maqaalkani waxa uu barayaa laba qalab ku anfacaya oo kaa caawin kara in aad kala qaybsan iyo badbaadin file MPEG kasta oo galay qaybo yar yar, iyadoo aan loo eegayn waxa files MPEG yihiin encoded leh.
Qeybta 1: Split MPEG files leh Wondershare Video Converter
Qeybta 2: Split MPEG files leh Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Sida splitter MPEG ah, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxay kuu ogolaanaysaa inaad kala jabeen file MPEG ah oo wuxuu galay qaybaha yar ee Dufcaddii. Hubi ay awoodi karto hoos ku qoran:
6x dhakhso leh multi-Processor
Iyada oo aan khasaaro tayo leh
Ikhtiyaar dib-u-Deji dhammaan qaabab joogto ah sida MP4, wmv, MOV, MPEG, FLV, iwm
Taageerada MPEG qaybsama, Mpg, MP4, wmv, MPEG, FLV, iyo in ka badan
All-in-mid MPEG splitter: Sidoo kale MPEG joiner, Converter MPEG, MPEG in DVD abuure
Tallaabooyinka Easy in ay u kala files MPEG
Haddaba ee maraan tallaabooyinka fudud si ay u dhinto MPEG video in qaybaha dhowr iyo dhoofinta ay u kala soocaan files waqti.
Talaabada 1: shuban files MPEG
Ka dib markii ay soo bixi oo lagu rakibay Video Converter Ultimate, double guji icon si ay u abuurtaan iyo waxaad arki doontaa daaqadaha aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Guji "Add Files" badhanka si ay u muujiyaan ilaa hadal browser inay ku shuban files MPEG ah. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi files MPEG ka your computer in daaqadaha hoose.
Talooyin : By "Load DVD" button, aad dillaaci kara DVD filimada iyo badalo si files MPEG yar qaybsiga.
Talaabada 2: Split MPEG in qeybaha
Si aad u kala qaybsan tahay an ku daray MPEG video, xaq waxa guji dooro "Edit" oo ka menu ka muuqata. Kuwa soo socda "goo" window of splitter MPEG furi doonaa. Markaas isticmaasho laba badhamada si ay u dejiyaan qaybaha: "Calan bilaabi dhibic" iyo "Calan dhibic dhamaadka". First dhaqaaqo Playhead si ay boos kasta oo guji "Calan bilaabi dhibic", oo u guuraan meel kale ka dibna riix "Calan dhibic dhamaadka". Sidaas, qayb ah ayaa lagu wadaa. Next, guji "clip New" (maqas ah) badhanka si ay u badbaadin.
Tallaabo 3: Ku bilow files qaybsama MPEG
Ugu dambeyntii, doortaan qaab inay u dhoofiyaan aad kala MPEG videos. Haddii aadan rabin in la beddelo qaab MPEG, kaliya waa inuu dhawro. Laakiin aad dillaaci kara MPEG in kasta oo qaabab joogto ah oo ay ku jiraan MPEG, MP4, MOV, wmv, iwm Ka dib markii la doortay qaab bartilmaameedka, waxaad ka heli doontaa in dhammaan clips leeyihiin magacyada isku xig xiga oo ku salaysan magaca asalka ah. Samayn, guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan files qaybsama MPEG.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa awood leh oo si sahlan loo isticmaali tafatirka software video. Marka ay timaado in aan kala tagno files MPEG, waxay fududaysaa in aad kala at boos kasta ee click ah. Sidaa daraadeed, waxa kale oo aad ka gooyn karo iyo paste clip ee aad u doonayo in la abuuro file cusub. Ka dib markii tageynaa files MPEG aad, kaliya waxa ay geliyaan si ay u YouTube direclty ka app ama dhoofinta qalabka la qaadi karo si aad u ciyaaro go ka.
Talaabada 1: files Import MPEG
Cabbayso oo dhan clips ilaha MPEG adigoo gujinaya "Import" xitaa folder faylka. Waxay muujin doonaa sida thumbnails maktabadda Warbaahinta. Ka dib markii in, ku dar clip MPEG ah in Jadwalka Video by jiita iyo dhibic.
Talaabada 2: files Split MPEG in click ah
Riix icon play in ay ku eegaan clip MPEG ah. Haddii loo baahdo, waxaad jiidi karaan slidebar ee suuqa kala previewing si ay kaaga caawiyaan in aad heshid meel sax ah (Carsaka by Weeraryahanka jir ayaa sidoo kale taageeray). Marka ay timaado in booska kala, waxaa ku xasil oo ka dhacay icon maqas ah si ay u dhinto aad MPEG clip laba qeybaha. Ku celceli, waxaad ka dillaacisay doonaa file a MPEG weyn clips seveal. Ugu dambeyntii, ka saar clips rabin by hit "Delete" on keyboard ah.
Talaabada 3: badbaadi kala file MPEG
Si aad u dhoofiyaan aad file MPEG kala, guji "Abuur" u muujiyo uu furmo suuqa wax soo saarka. Markaa waa inaad aadaa tab qaabka, dooro qaab aad u doonayay inaan badbaadiyo gal your computer. Sidoo kale, waxaad si toos ah u YouTube wadaagi kartaa abuurka, ama guba in DVD loogu daawashada dib aad DVD guriga ciyaaryahanka.
Halkan waa hage video ah: